ဘာရီမှာဘာစားရမလဲ Absolut ခရီးသွားခြင်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးသောအစားအစာများအနက်တစ်ခုမှာအီတလီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ခရီးစဉ်တွင်ကီလိုဂရမ်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တောင်ဘက်သို့သွားသောအခါလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ခရီးသွား cities ည့်သည်ဆုံးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သောဘာရီကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြရပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကိုလေ့လာကြမည် ဘာရီမှာဘာစားရမလဲ
အမှန်တရားကတော့အီတလီအစားအစာဟာနယ်စပ်အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့မီးဖိုချောင်တွေရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုခံယူနေဆဲဖြစ်ပြီးမြောက်ဘက်တွင်ပြင်သစ်အစားအစာအချို့ရှိသော်လည်းတောင်ဘက်တွင်ဟင်းပွဲများသည်မြေထဲပင်လယ်ဒေသဖြစ်ပြီးငါး၊ သံလွင်ဆီနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများလည်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဘာရီမှာစားရတာပျော်ဖို့ဒီအချက်အလက်တွေကိုချရေးပါ။
7 အာလူး၊ ဆန်နှင့် mussels
Bari က လူသိများသောအီတလီမြို့သည်တည်ရှိသည် Naples နှင့် Palermo အကြား, လှပသော၏ကမ်းခြေပေါ်မှာ Adriatic ပင်လယ်။ ၎င်းတွင်အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်များ၊ ရောမအမွေအနှစ်များ၊ နန်းတော်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဘဝသည် gastronomic စီးပွားရေးကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။
မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသည်၎င်း၏အစားအစာအခြေခံအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည် ငါး မတူညီ ရေဘဝဲ အမြဲတမ်းလတ်ဆတ်သော ပင်လယ်ကမ်းခြေ အရသာရှိတဲ့ ဂုံး။ ကုန်ကြမ်းကိုစားသောငါးနှင့်ခရုခွံများရှိသော်လည်းချက်ပြုတ်ထားသောအခြားသူများလည်းရှိသည်။ ဒီနောက်ဆုံးအုပ်စုတွင်ရိုက်ထည့်ပါ ကျောက်ပုစွန်၊။ အများအားဖြင့်ဂန္ထဝင်သောအဖော်များမှာဒေသခံဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ကောင်းမွန်စွာအရသာရှိသောဝက်အူချောင်းများနှင့်ရောစပ်ထားသည်။
ဘာရီပတ် ၀ န်းကျင်ရှိနယ်မြေများမှာသူတို့၏အရည်အသွေးနှင့်ကျော်ကြားသည် သံလွင်ဆီဒါပေမယ့်လည်းအားဖြင့် ကြက်သွန်ဖြူအဆိုပါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသစ်များအဆိုပါ cilantro, Las chicory, aubergines, ကျယ်ပြန့်ပဲနှင့်ကုလားပဲ။ အားလုံးအတူတကွလူကြိုက်များဥပမာ, ပေါင်းစပ်နေကြသည် minestrone ဟင်းချို.
Es ဖုတ်ထားသောခေါက်ဆွဲ။ တနင်္ဂနွေဟင်းလိုမျိုးအ ၀ င်အစမှာ၊ အသားတွေ၊ ကြက်ဥတွေနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဟာတစ်ပတ်ရဲ့အချိန်မရွေးစားနိုင်ပြီးစားသောက်ဆိုင်မှာအမြဲတွေ့နိုင်တယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ခေါက်ဆွဲ, Bari အတွက် ခေါက်ဆွဲများကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်ရေ, မုန့်ညက်နှင့်ဆားနှင့်, များစွာသောဟင်းလျာများ၏ခြေရင်း၌တည်ရှိ၏။ ဂန္တ ၀ င်ဂန္တ ၀ င်တစ်မျိုးမှာလက်ဖြင့်ပုံဖော်ထားသော orecchiette သို့မဟုတ်ငံပြာရည်ကိုကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော cavatelli နှင့် fricelli တို့ဖြစ်ပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသားများနှင့်ငါးများမှပြုလုပ်သည်။
အပေါ်ကပြောခဲ့တာက မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသည်ဘာရီအစားအစာအတွက်ငါးနှင့်ပင်လယ်စာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့ကိုချက်ပြုတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံကုန်ကြမ်းများစားကြသည်။ ငါးကြမ်းငါးသည်ဂျပန်၏တီထွင်မှုမဟုတ်ပါ၊ ဤနေရာတွင်လူများသည်၎င်းအားနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းအဖြစ်လည်းယူမှတ်ကြသည်။ ၎င်းကိုအက်စစ်ရီတာ (သို့) အမြန်ရေစာအဖြစ်စားသည် တံငါသည်ထံမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ငါး၊ ရေဘဝဲ၊ မုန်လာဥ၊ ကျောက်ပုစွန်၊ သံပုရာဖျော်ရည်မပါဘဲဒါကြောင့်သင်ဟာ filter ရဲ့မပါဘဲပင်လယ်ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးအရသာအတွက်ပျော်ဖို့လိုတယ်။
ဤတွင် focaccia သည်လမ်းရိုးအစာမျှသာမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ဘာသာရေးအတွေ့အကြုံတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုသူတို့ကဆိုကြသည်။ ဒီပန်းကန်ကိုပေါင်းစပ် မုန့်ညက်, ရေ, ဆား, ရေနံနှင့်တဆေးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ သံလွင်သီးများ၊ လတ်ဆတ်တဲ့ခရမ်းချဉ်သီးများကဲ့သို့တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ဖုံးအုပ်ထားသည့်အာလူးနီများဖြင့်အရသာရှိပါသည်။
အဆိုပါ focaccia ကအဓိကပန်းကန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရုံရေစာဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သင်ကမြို့မှာရှိတဲ့မုန့်ဆိုင်အားလုံးမှာတွေ့လိမ့်မယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုသည် Fiore Bakery ဖြစ်ပြီးလှပသောလမ်းကြား၌တည်ရှိပြီး San Nicola ဘုရားကျောင်းနှင့် San Sabino ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှအနည်းငယ်သာလှမ်းသည်။
၎င်းသည်ဘာရီ၏ရိုးရာအသင်း ၀ င်ဖြစ်သည် အားလုံးမီးဖိုချောင်ထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်s ။ ငါ sgagliozze, ပြောင်းဖူးဂျုံယာဂုအကြောင်းကိုပြောနေတာ, ချက်ပြုတ်ထားသောပြောင်းဖူးအစားအစာ, စတုရန်းပုံသဏ္givenာန်ပေးထားသောအချပ်သို့ဖြတ်ခြင်းနှင့်ရေနံပူ၌စွဲလန်းနှစ်သက်သည်။ ရလဒ်မှာဒေသခံများစားသုံးသည့်အလွန်ငန်သောရွှေနှင့်အရသာအလွန်ကောင်းသောမုန့်စိမ်းဖြစ်သည်။
ဘာရီတွင်လူကြိုက်အများဆုံး sgagliozze ထမင်းချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ Maria de Sgagliozze ဖြစ်သည်။ သူမအသက်ရှင်သေးလျှင်ယနေ့သူမအသက် ၉၀ ကျော်ရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်းများသောအားဖြင့်သူမသည်အိမ်တံခါးဝတွင်ချက်ပြုတ်ပြီးယူရို ၁ မှ ၃ ကြားကြားရောင်းသည်။ သူသည်ကိစ္စရပ်များတွင်ရှင်သန်နေသောဒဏ္legာရီတစ်ခုဖြစ်သည် ဘာရီရှိလမ်းပေါ်အစာ.
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူငယ်ချင်းများကိုလက်ခံခြင်းသည်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာအရသိရသည် ၎င်း၏အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်မိသားစုတစ်ခုလုံးပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဆိုလိုအားလုံးအတူတူမုန့်စိမ်းအောင်, စားပွဲပတ်လည်။ ကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြီးနောက် mozzarella နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများဖြင့်နီးကပ်ပြီးကြော်ပါ.
ဘာရီတွင်ဤဂန္ထဝင်မျိုးကွဲများစွာရှိသည်။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာ၎င်းဖြစ်သည် အသားသို့မဟုတ် nab နှင့်အတူကျပ်ယူအက်စ် အစာ ကောင်းသော panzerottis များကို ၀ ယ်ယူပြီးအလယ်ခေတ်နံရံများဖြစ်သော Muraglia မှတဆင့်လမ်းလျှောက်နေစဉ်၎င်းတို့ကိုစားရန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။
အာလူး၊ ဆန်နှင့် mussels
ဘာရီအစားအစာကနေအလွန်ဂန္ထဝင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်တန်း။ ထဲမှာ မြေနှင့်ပင်လယ်ထုတ်ကုန်များကိုကျွမ်းကျင်စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုစီတွင်မည်သည့်အချိုးအစားရှိသနည်း။ ဘယ်သူမှသေချာမပြောနိုင်ဘူး။ ဒါကမျက်စိနဲ့ထမင်းချက်ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ ဒီနည်းနဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ချိန်ခွင်လျှာမျှသာရတယ်။
ဘာရီမှာရှိတဲ့ခေါက်ဆွဲအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့အဲဒါကိုငါတို့နာမည်ပေးတယ်။ ၎င်းသည်ဘာရီတွင်အများဆုံးဂန္ထဝင်ခေါက်ဆွဲဖြစ်သည် ၎င်းသည်သေးငယ်သည့်နားနှင့်တူသောကြောင့်၎င်းကိုခေါ်သည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ကအစဒီမှာသူ့ကိုခေါ်ပါ မင်္ဂလာပါ၎င်းကိုမည်သို့ပြင်ဆင်သည်နှင့်ဆက်စပ်သောစကားလုံးတစ်လုံး - ဓားဖြင့်မုန့်စိမ်းကိုအပိုင်းအစငယ်များစွာအဖြစ်ခွဲထုတ်ပြီးနောက်၎င်းတို့သည်မြောင်းရေအရသာရှိသော turnip ခေါင်းနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။
ဘယ်မှာစားနိုင်လဲ။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Castello Svevo ရှေ့မှာဘာရီမြို့ဟောင်းမှာမင်းအိမ်မှာတွေ့ရတဲ့ orecchiettes ရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးအဟောင်းတွေနဲ့လမ်းတစ်လမ်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သငျသညျသူတို့ယခုအချိန်တွင်သူတို့လုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်နှင့်သူတို့သည်မဆိုင်းမတွမရှိဘဲသင်တို့အဘို့ပန်းကန်ကိုပွငျဆငျ။ မဝယ်ခင်လမ်းလျှောက်ပါ။ ဈေးနှုန်းသည်ကောက်ပဲသီးနှံအမျိုးအစားများအရကွဲပြားသော်လည်း၊ တွက်ချက်သည်5နှင့် 8 ယူရိုအကြား။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်ပထမအချိုပွဲ။ အကြောင်းပါ postra မုန့်နှင့်ပြည့်စုံနှင့် icing သကြားနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်, filo မုန့်စိမ်းနှင့်လုပ်ထားတဲ့။ အရမ်းချိူတယ်။
အားလပ်ရက်များသို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်နေ့လယ်စာစားရန်အတူတကွစုဝေးလေ့ရှိပြီးစားပွဲပေါ်တွင်အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိသည့်ပန်းကန်မှာမြင်းခုတ်ဖြစ်သည်။ အလတ်စားမှကြီးမားသောအသားလိပ်တစ် ဦး အတွက် seasoned မင်္ဂလာပါ, caciocavallo ဒိန်ခဲနှင့်ဝက်သားထောပတ်နှင့်အတူကျပ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကောင်းစွာပုံမှန်လမ်းအစားအစာ နှင့်အရသာ။ ဒါကိုလည်းခေါ်တယ် ရေတံခွန် ထို့အပြင်ဘာရီမြို့ဟောင်း၏လမ်းမကြီးများထောင့်ရှိအိမ်ရှင်မများကနေ့တိုင်းပြင်ဆင်သည်။ Piazza Mercantile တွင်အကောင်းဆုံးအချို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အဆိုပါပီဇာသည် polenta မပါဘဲ sgaliozze နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
ဘာရီမှာအနုပညာဗားရှင်းရှိတဲ့အီတလီဂန္ထဝင်ကိုမမေ့နိုင်ပါဘူး။ အရသာရှိတဲ့ဗားရှင်းကတော့ brioche နှင့်ပြည့်စုံ helado စမ်းသပ်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုမှာ Gelateria Gentile ဖြစ်ပြီးလမ်းပေါ်တွင်စားပွဲများနှင့်ဘိုင်ဇန်တိုင်းရောင်ခြည်ဖြင့် Castello Normanno - Sevevo တွင်တည်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးသင်သဘောပေါက်မိသလိုပဲ၊ လမ်းအစားအစာတွေအများကြီးရှိတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပြင်ဘက်ရှိခုံတန်းရှည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်ထိုင်။ ရိုးရိုးလေးစားနိုင်သည်။ ဘာရီလိုပဲ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဘားဆိုင်များသို့သွားနိုင်သည် (မိသားစုစားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များသည်များသောအားဖြင့်ငွေသားကိုသာလက်ခံလေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ယင်းကိုသတိရပါ)၊ သို့သော်ဤအီတလီမြို့တော်တွင်အထူးအကြံပြုအပ်သောအရာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက၎င်းသည်အတိအကျဖြစ်သည်။ လမ်းလျှောက်ပါ၊ လမ်းလျှောက်ပါ၊ အနံ့အရသာနှင့်အရသာအရသာခံပြီးလမ်းမများပေါ်တွင်ပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်။
တံခါးပေါက်တိုင်းသို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်နောက်ကွယ်တွင်သို့မဟုတ်လမ်းကြားများ၌အမြဲတမ်းအလုပ်များနေသောမီးဖိုချောင်များသည်ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်။ နံနက်ခင်းနှင့်နေ့လည်ခင်းတွင်လူများစကားပြောနေကြသည်၊ ထွက်သွားခြင်းကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဘာရီမှာဘာစားရမလဲ
ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာ၊ Classical ဂရိရှိအလှအပ